GIORGIO ARMANI ကချပြလိုက်တဲ့ အလန်းစား Dress Design အသစ်များ! – FemaleWear.net
GIORGIO ARMANI ကချပြလိုက်တဲ့ အလန်းစား Dress Design အသစ်များ!
GIORGIO ARMANI ဟာ Italy Brand ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာနဲ့အဝှမ်းလူကြိုက်များ နှစ်သက်ကြတဲ့ Brand ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရေအသွေးပိုင်းအားဖြင့် ပြောစရာမရှိလောက်အောင် နှစ်ပေါင်းကြာရှည်စွာ သုံးစွဲသူတွေရဲ့ အားပေးထောက်ခံမှုကို ရရှိထားပြီး အခုအခါမှာလည်း အသစ်ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Dress Design အသစ်လေးတွေကို ချပြလိုက်ပါတယ်။
၁. ရာနှုန်းပြည့် ချည်သားဖြင့်ချုပ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး နောက်ဇစ်တပ်ပုံစံ လက်ပြတ်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ V-shape design ဖြစ်ပြီး အရှေ့အတွန့်ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ ပေါ့ပါးသွက်လက်တဲ့ Dress ပုံစံလေးပါ။ သာမန်ထသွားထလာ ဝတ်ဆင်လို့ရသလို ပွဲနေ့ပွဲထိုင်တွေမှာလည်း ဝတ်ဆင်လို့ရပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် ဒေါ်လာ ၁၇၉၅ ဖြစ်ပါတယ်။
၂. 70% Polyamide, 30% Silk နဲ့ချုပ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး ဖဲသားနဲ့ချုပ်လုပ်ထားပါတယ်။ နောက်ဇစ်ပိတ်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး လည်ဝိုင်းပုံစံ လက်ပြတ် Dress အမျိုးအစားလေးဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းကိုဆန်းသစ်တဲ့ ဒီဇိုင်းအသွင်မျိုးနဲ့ နုပျိုလန်းဆန်းတဲ့သဏ္ဍန်ကို ဆောင်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် ၂၂၉၅ ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။
၃. 95% Viscose, 5% Elastane နဲ့ချုပ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး လည်ဝိုင်းရင်ပြတ်ပုံစံ အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ရင်ဘတ်နားမှာ အတွန့်လေးတွေနဲ့ချုပ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး ပုခုံးကြိုးပေါ်မှာ စိန်တုလေးတွေနဲ့ပါ အလှဆင်ထားပါတယ်။ နောက်ဇစ်တပ်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီး Dress အရှည်အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် ၂၅၉၅ ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။
၄. Jeans ပုံစံနဲ့ချုပ်လုပ်ထားပြီး ပုံမှန်ထသွားထလာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဝတ်ဆင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ရှေ့ဇစ်ကိုအလှဖော်ချုပ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး ကော်လံလေး ပါ,ပါတယ်။ လက်တိုအဖြစ်ပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပြီး လက်နှစ်ဖက်ထည့်လို့ရအောင် အိတ်ကပ်လေးတွေပါ ထည့်သွင်းချုပ်လုပ်ထားပါတယ်။ ခါးပတ်အသေးလေးပါဝင်တဲ့အပြင် Lining ကိုတော့ ပန်းပွင်းပုံဖော်ထားတဲ့ အစနဲ့ ချုပ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် ဒေါ်လာ ၂၂၉၅ ဖြစ်ပါတယ်။
Emporio Armani ရဲ့ အိတ်ဒီဇိုင်းအသစ်များ!